Ungazikhusela njani iiFolda eziHanjisiweyo zeWebhu ezinamagama agqithisiweyo
Omnye wemisebenzi ethathelwa ingqalelo kukhuseleko lweseva kukukwazi ukukhusela igama eliyimfihlo ngokukhusela iifolda ezithile ezibanjwe kwiwebhu kwinqanaba lomncedisi. Kwinkqubo yokusebenza ye-UNIX / Linux, unokukhusela iifolda kunye neefayile usebenzisa iimvume zefayile. Unokongeza inqanaba elongeziweyo lokhuseleko kubasebenzisi bewebhu, ubavumela ukuba bafikelele kuphela kumaphepha kwifolda ukuba banegama eligqithisiweyo.
Ngamanye amaxesha abantu bafuna ukukhusela iindawo ezithile kwiiwebhusayithi zabo kwaye benza oku ngokusebenzisa inkqubo yokukhuselwa kwephasiwedi kwisiza ngokwaso: Le yindlela efanelekileyo yokufezekisa inqanaba lokhuseleko. Nangona kunjalo, awudingi ukongeza isoftware eyongezelelweyo ukwenza oko kwiwebhusayithi; umncedisi sele enendawo eyakhelwe ngaphakathi.
Zonke iiseva zewebhu zibonelela ngoku kusebenza, kwaye iyenziwa ngendlela efanayo kuyo yonke ibhodi. KwiCanel, ugcwalisa la manyathelo alandelayo ukongeza ukhuselo lwegama eligqithisiweyo kwiifayile kunye neefolda:
Ngena kwi-canel uze uskrolele ezantsi kwicandelo lokhuseleko.
Cofa kwiPhasiwedi Khusela iZalathiso.
Ukuba ibhokisi iyavela, khetha i-domain ofuna ukuyikhusela.
Khetha ifolda ofuna ukuyikhusela.
Kwi-cPanel, izikhombisi zinokukhuseleka kuphela ukuba ngokuthe ngqo kwingcambu yewebhu. Qaphela ukuba zonke iifolda ezingaphantsi zeefolda ozikhuselayo ziya kukhuselwa ngegama elifanayo.
Qaphela ukuba kwiCanel igama Izalathiso ihlala isetyenziswa, kodwa kule meko eli gama iifolda . Amagama amabini anokusetyenziswa ngokuchaseneyo. Oochwephesha bathanda ukubabiza ngokuba ngabalawuli, kodwa xa ujonga ubume besikhombisi usebenzisa iGraphical User Interface (GUI), ii icon ziyasetyenziswa kwaye i icon yomkhombandlela ngumfanekiso wefolda.
Kwiphepha lokukhusela igama eligqithisiweyo, cofa kwiPassword Protect This Directory box, unike igama igama umkhombandlela, emva koko ucofe ku Gcina.
Eli gama liyavela xa umntu othile ezama ukufikelela kwisikhangeli kwaye acelwa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Yenza okungenani umsebenzisi omnye kulawulo olukhuselweyo lwegama eligqithisiweyo. Chwetheza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha (kabini).
Cofa Yongeza / Guqula uMsebenzisi oGunyazisiweyo.
Isikrini sokuqinisekisa siyavela.
Cofa Buyela emva kwaye ezantsi kwesikrini ubona igama lomsebenzisi ogunyazisiweyo osandula ukumdala.
Ngoku ungongeza abasebenzisi abongezelelweyo ukuba kukho imfuneko. Bonke abasebenzisi abenziwe kwifolda nganye banenqanaba elifanayo lokufikelela.
idosi ephezulu yeguaifenesin
Esi sikhombisi ngoku sikhuselwe ngegama eligqithisiweyo; Nabani na ozama ukufikelela kuyo nangaliphi na ixesha kuya kufuneka anike igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Akukho mfihlo okanye ngaphezulu kwephasiwedi. Ukuba ulibale iphasiwedi oyenzileyo, kufuneka ubuyele kwiCanel kwaye uyiguqule okanye wenze umsebenzisi omtsha.
Ukhuselo lwegama eligqithisiweyo alisebenzi kubasebenzisi abadibanisa ngeFTP okanye basebenzise umphathi wefayile ngeCanel. Kuphela kubasebenzisi bewebhu abajonga amaphepha ngaphakathi kweefolda.
cPanel ukhuselo lwegama eligqithisiweyo lenziwa kusetyenziswa i.ukwiiifayile. Le fayile ibekwe ngaphakathi kwifolda ukuze ikhuselwe. Nangona abasebenzisi bewebhu bengakwazi ukufikelela kule fayile, inokugqitywa yenye.ukwiiifayile kwiesidlangalaleni_htmlulawulo. Ngaba ucinga ukuba kuvakala ngathi awukhuselekanga?
Sukuba nexhala; iesidlangalaleni_htmlulawulo.ukwiiIfayile inokukwazi ukugqithisa ukhuseleko lwegama eligqithisiweyo, kodwa i-hacker ayinakutshintsha lonto ifayile ngaphandle kokuba sele eneengcambu zokufikelela kwinkqubo yefayile. Xa enengcambu yokufikelela, ukhuseleko lwegama eligqithisiweyo alisebenzi kuye nakanjani.
ukucofa njani iinzipho zenja
Ukudibana kweziyobisi kwi-web md
Imicrogestin 1 iziphumo ebezingalindelekanga eziyi-20
amayeza esi sifo sika crohn
yintoni eyenza ilungu leqela elilungileyo
st John's wort idosi
Ngaba naproxen yipilisi yeentlungu